सुदूरपश्चिम प्रदेश Archives - Page 87 of 95 - Purbeli News
Trending # मृत्यु175# पक्राउ132# दुर्घटना38# हत्या24# घाइते15# बलात्कार15# उदयपुर11# इटहरी11
इटहरी जनप्रतिनिधीहरूको शय दिन : उपलब्धी शुन्य : काम भन्दा गफै बढी
इटहरी – स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि इटहरी उपमहानगरपालीकाले जनप्रतिनिधी पाएको आज बुधबार एकसय २ दिन पुगेको छ । दोश्रो चरण अन्तरगत गत असार १४ गते प्रदेश नं १, २, ५ र ७ का ४३ जिल्लामा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । सोही निर्वाचन पश्चात इटहरी उपमहानगरले २० बर्षपछि स्थानीय जनप्रतिनिधीहरू पाएको आज बुधबार एक सय २ दिन पुगेको हो । गत असार २५ गते निर्...
इलाम / सूर्योदय दृष्यावलोकनका लागि नेपालकै उत्कृष्ट स्थान मानिएको पूर्वी इलामको अन्तुमा मौसम खुलेसँगै पर्यटक आवागमन शुरु भएको छ । मौसममा सुधार आएपछि आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आउने क्रम शुरु भएको हो । सूर्योदय, सूर्यास्त, हिमशृङ्खला तथा नेपाल र भारतका थुप्रै स्थानलाई आँखै अघिनै नियाल्न सकिने अन्तु क्षेत्र प्राचीन लेप्चा जातिको लोपोन्मुख संस्कृति, क...
धरान स्थित दन्तकाली मन्दिरको महिमा, ऐतिहासिक तथ्य र किम्बदन्ती
सुनसरी / सुनसरीको धरान नगरपालिकास्थित विजयपुर डाँडोमा पर्ने दन्तकालीको चर्चा रुद्राक्षारण्य महात्म्यले गरेको छ । तीन तहको छाना युक्त नेपाली तले शैलीमा निर्मित यो मन्दिरको छाना माथि धातुको आकर्षक गजुर पनि राखिएको छ । दन्तकाली मन्दिरमा पुजनिय बस्तु दाँत आकारको पथ्थर हो, जसलाई स्वस्थानी ब्रत कथामा आधारित सतीदेवीको दाँत मानिन्छ, जहाँ सतीदेवीको दाँत...
यसरी भएकाे थियाे पाथिभरा देविकाे उत्पति…
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको पाथीभरा देवी नेपालकै चर्चित धार्मिक पर्यटकीयस्थलकाे रूपमा मानिन्छ । पूर्वाञ्चलमा भने पर्यटकहरूकाेलागि पहिलाे गन्तब्य बनिने गरेकाे छ । चारैतिर हराभरा र उकाली अाेराली बिच पहाड तथा हिमाली भेगकाे फेदमा लेक लाग्ने ठाउमा पर्दछ पाथिभरा देवि मन्दिर । याे मन्दि यात्रा गर्न जाे काेहिका लागि त्यती सहज छैन । यात्रा कठिन भएकै कारण धे...
इटहरीमै सिटी र्याफ्टिङ संचालन
इटहरी / इटहरीमा नै मुहान भएर इटहरी बजार भएर बग्ने टेंग्रा खोलामा पहिलो पटक सिटी र्याफ्टिङ संचालन भएको छ । इटहरीको वडा नम्बर चारले बनाएको टेंग्रा खोलामा व्यवशायिक सिटी र्याफ्टिङ संचालनको परिक्षण अध्ययनको लागी र्याफ्टिङ संचालन गरिएको थियो । पहिलो परिक्षणमा नै इटहरीमा सिटी र्याफ्टिङको संवानाको आशा सफल भएको सेवा प्रदायक सुरेश बस्नेतले बताए । सिटी र्...
गुरुयोजना निर्माण गरी बेतना सिमसारको बिकास गरिने
बेलबारी । मोरङको बेलबारीमा रहेको बेतना सिमसार सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिले गुरु योजना निर्माण शुरु गरेको छ । सिमसार क्षेत्र रहेको बनले गुरु योजना बनाउन थालेको हो । पर्यटन प्रर्बद्धन गर्ने उदेश्यले सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिको पहलमा गुरुयोजना बनाउन थालिएको हो । हरित नेपाल काठमाण्डौको प्राबिधिक सहयोगमा गुरु योजना बनाउन थालिएको बेतना सिमसार सामुदायि...
इलाम, १७ भदौ । देवी देवता खुशी पार्ने निहसमा धेरै मठमन्दिर र धार्मिकस्थलमा बलि चढाउने गरिएता पनि इलामको यस्तो ठाउँ छ जहाँ पशुबध गर्न कहिल्यै दिइदैन् । जिल्लाको पश्चिमी माङसेबुङ गाउँपालिकाको बाँझोस्थित किराँत धर्मावलम्बी रहेको माङसेबुङमा अहिले पनि पशुबलि र मदिरा निषेध छ । यहाँका प्रत्येक घरैपिच्छे तीनवटा बाँसका लिङ्गामा राता र सेता रङका ध्वजा राखिएक...
तेह्रथुमको (’च्याङलुङ’) चाङलुङ गुफलाई पर्याटकिय रुपमा बिकास गर्न बृक्षरोपण
तेह्रथुम– पर्यटकीय सम्भावना बोकेको करिब ५ किलोमिटर लामो ऐतिहासिक चाङलुङ (’च्याङलुङ’) गुफालाई पर्याटकिय रुपमा बिकास गर्ने उदेश्यका साथ बृक्षरोपण गरीएको छ । गुफा क्षेत्रमा बिभीन्न प्रजातीका बिरुवमा स्थानीयहरुद्धारा रोपण गरएको तक्मीनाक्ला संरक्षण समितीका अध्यक्ष महेन्द्र मादेनले बताउनु भयो । जिल्ला बन कार्यलय तेह्रथुमको सहयोगमा गुफा क्षेत्रमा तेजपात, ...
इलाममा मात्र करिब पाँच अर्बको दूध उत्पादन
इलाम । दूध उत्पादनमा अग्रणी जिल्लाका रूपमा कहलिएको यस जिल्लामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा दूध उत्पादनमा १.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आव २०७२÷०७३ मा एक लाख २१ हजार ५६२ मे.ट. दूध उत्पादन भएकोमा गत वर्ष २०७३÷०७४ मा एक लाख २३ हजार ७४० मे.ट. दूध उत्पादन भएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालय इलामले जनाएको छ । व्यावसायिक गाईपालनमा वृद्धि भएसँगै पाँच वर्षदेखि...
विराटनगर राधाकृष्ण रथ यात्रा सम्पन्न
विराटनगर, ३१ साउन । ऐतिहासिक राधाकृष्ण रथ यात्राको ५० आँै संस्करण आज विधिवत् रुपमा सम्पन्न भएको छ । श्री कृष्णजन्मा अष्टमीको भोलिपल्ट विरानगर–३ को पानी ट्यांकीस्थित राधाकृष्ण मन्दिरबाट सुरु भएको रथ यात्रा विरानगरको मुख्य बजार क्षेत्र हुँदै महेन्द्रचोक पुगेर पुनः सोही मार्ग हुँदै राधाकृष्ण मन्दिरमा पुगेर समाप्त भयो । रथ यात्राको दर्शन गर्न ह...